?Dastuurka qabyo qoraalka TFG-da iyadaa iska qoratay nalagama tashan? M/wayne Faroolle – Radio Daljir
?Dastuurka qabyo qoraalka TFG-da iyadaa iska qoratay nalagama tashan? M/wayne Faroolle
Addis Ababa, May 17 – Madaxwaynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle ayaa ka hadlay sababtii ay Puntland ku dhaliishay qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, xilli uu magaalada Muqdisho kasoconayo qorshaha lagu anisixnayo qabyo qoraalka dastuurka uu yeelanayo Soomaaliya.
Isagoo soo gabagabeeyay booqasho uu ku joogay dalka India, kuna sugan caasimadda Itoobiya ee Addis ababa ayaa waraysi uu siiyay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da uu ku sheegay qabyo qoraalka dastuurka inaanu ku jirin qobadii lagu yaqaiinay nidaaamka faderaalka oo la doonayo in dalka laga hirgaliyo.
Waxaa uu tilmaamay marar badan inay soo jeediyeen guddiga dastuurka in lagu soo darro xubno katirsan Puntland, hasse ahaatee arinkaasi laga soo horjeestay, markii dambena ay isku haleeyeen wasiirka dastuurka ee dowladda KMG oo kasoo jeeda Puntland iyo raysul wasaaraha.
??Isku haleynteena waxay ahayd Wasiirka dastuurka laftiisa waa reer Puntland,Ra?iisul Wasaaraha meesha waa joogay.qoraalo badan waan ka sameynay,waxaan la yaabnay dukumiinti la isku keenay iyagoo 8-bilood haystay ugu dambeyntii 30-kii April nala soo direy,waxna aan ku qornayn Dowladda Federaalka waxay isku raaci lahayd” ayuu sheegay madaxwayane Faroolle.
Madaxwayanaha ayaa cadeeyay in loo baahanyahay in la tixgeliyo aragtiyaha shacabka ee la xiriirta qodobada qabyo qoraalka dasrtuurka qaarkood in isbedel lagu sameeyo.
Hadalka madaxwayne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle ayaa kusoo beegmaya, xilli magaaladda Addis ababa la filayo inuu ka dhaco shir kusaabsan muranka ka oogan qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, waxaana shirka ka qaybgalaya saxiixayaasha heshiisyadii road-mapka oo ay Puntland ka mid tahay.